Kushanyira kuCameroon | Zvakaita Dzimwe Nyika
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
VANHU verudzi rwechiBaka—vanozivikanwawo semaPygmy—vanofanira kunge vari ivo vokutanga-tanga kugara muCameroon. VechiPutukezi vakazotanga kusvika makore okuma1500. Papera mazana emakore vanhu vechiPutukezi vasvika, vaFulani—vanhu vechiIslam—vakabva vakunda chikamu chokuchamhembe cheCameroon. Iye zvino pavagari vokuCameroon vanosvika 40 muzana vanozviti vaKristu, chikamu 20 muzana chinozviti vaMuslim, uye chimwe chikamu 40 muzana chinotevedzera tsika dzezvitendero dzemadzitateguru avo omuAfrica.
Zvapupu zvaJehovha zvakabudisa mabhuku anotsanangura Bhaibheri muchiBassa, mutauro unoshandiswa kuCameroon
Vanhu vanogara kumaruwa munyika yeCameroon vane mutsa kuvaenzi. Vaenzi vanomhoroswa vopinzwa mumba mavanopiwa mvura yokunwa nezvokudya. Ukaramba zvokudya zvaunenge wapiwa zvinonzi unenge wavashora, asi ukagamuchira unenge waratidza kuvatenda.
Musati matanga kutaura dzimwe nyaya munotanga nokukwazisa mhuri yose nokubvunzana upenyu. Zvakajairika kunzwa vamwe vachibvunza kuti zvipfuyo zvakadii! “Muenzi kana ava kuenda, kungomuti ‘Mofamba zvakanaka,’ hazvina kukwana,” anodaro murume anonzi Joseph, anogara kuCameroon. “Kazhinji, muridzi wemba anoperekedza muenzi votombofamba mumugwagwa vachitaura sezvaanomuperekedza. Vati fambei, ndipo paanozochionekana naye iye odzokera kumba. Muenzi anenge asina kugamuchirwa seizvi anogona kufunga kuti zvimwe atarisirwa pasi.”
Zvikepe zvinogadzirwa nemakwati emiti zvinowanzooneka muRwizi rwaSanaga. Maseiri acho anogadzirwa nechero chavanenge vawana
Pamunenge muchidya, dzimwe nguva boka reshamwari rinogona kudyira mundiro imwe chete dzimwe nguva vachitodya nemaoko. KuCameroon, iyi itsika inoratidza kuti vanhu vakabatana zvechokwadi. Dzimwe nguva izvi zvinowanzoitwa kuti ushamwari hwakanga hwava nemakore hwapera humutsidzirwe. Zvose izvi zvinoratidza kuti kudya pamwe chete zvakangofanana nokutaura kuti, “Tinowirirana.”
Zvapupu zvaJehovha zvinobudisa magazini ino, zvakarongwa kuva ungano dzinopfuura 300 muCameroon uye zvinodzidzisa Bhaibheri vanhu vanenge 65 000 munyika iyoyo
ZVAKAITA NYIKA YACHO
Pavanhu vechiPygmy anenge akura anenge akareba mamita ari pakati pe1.2 uye 1.42
Nhamba yevagari: Vanenge mamiriyoni 20
Guta Guru: Yaoundé
Mamiriro okunze: Nechokuchamhembe kunopisa uye hakuna mvura asi nzvimbo dziri pedyo negungwa dzinopisa uye dzichinaya mvura yakawanda
Zvavanotengesa kune dzimwe nyika: Oiri, cocoa, kofi, donje, mapuranga, simbi yealuminum
Mitauro inoshandiswa: Chirungu uye chiFrench, pamwe chete nemimwe mitauro 270 yemuAfrica inotaurwa zvakasiyana-siyana
Kushanya kuNew Zealand